Xiisad Ka Dhex Qaraxday Mareykanka Iyo Itoobiya | Hayaan News
Xiisad Ka Dhex Qaraxday Mareykanka Iyo Itoobiya
Washington / Addis Ababa (Hayaannews):- Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykanka inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeedhay Madaxwayne Donold Trump, kaas oo la xidhiidha biyo-xidheenka Webiga Niilka ee ay Tamarta Korontada ka dhalinayso Itoobiya oo ay dhawaan bilawday dhaamintiisa.
Qoraal ay soo saartay wasaradda arrimaha dibedda ee Itoobiya, ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Abab.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Gedu Andargachew, ayaa xafiiskiisa ugu yeeray safiirka Mareykanka ee itobiya Mike Raynor si uu sharaxaad uga bixiyo hadalkii Trump ee ahaa in Masar ay burburin karto biya-xireen ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Nile.
Mr Gedu ayaa hoosta ka xariiqay inay marin-habaabin tahay wararka sheegaya in biya-xireenka uu hakinayo qulqulka biyaha wabiga Nile. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in madaxwayne Mareykan ah oo xil haya uu huriyo colaad dhexmarta Masar iyo Itoobiya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalak Itoobiya ayaa dhanka kale u sheegay safiirka Mareykanka in Itoobiya aysan waligeed ka baqin hanjabaad ka dhan ah madaxbanaanideeda, islamarakna ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadaxaajoodka ay gar-wadeenak ka yihiin midowga Afrika.
Mar sii horreysay ria’sul wasxaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisa ” uusan u dulqaadan doonin daandaansi ama gardaro noocey doonto ha ahaa ” ka dib markii madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Masar ay burburin karto biya-xireenka ay Itoobiya ka dhistay wabiga Nile.
Mr Abiy Ahmed si toos ah ugama jawaabin hadalka Trump, balse waxaa muuki shaki ah waxa ku kalifay Mr Trump hadalka uu sheegay. Dr Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka. “Itoobiya isma dhiibi doonto gardara noocey doonto ha ahaatee,” ayuu yidhi. “Itoobiya waligeed jilbaha uma dhigan oo ma adeecin cadowgeeda, balse waxay xushmeysaa saaxibadeed, ma sameynayno maanta mustaqbalkana ma sameyn doono.”
Hanjabaad kasta oo arrintan ku saabsan waa “mid aan loo meel dayin, oo aan natiijo ka soo baxeyn islamarkana jabinaysa shuruucda caalamiga ah”. Ayuu intaa ku daray.
Hadalka Ra’iIsul-wasaaraha Abey Axmed ayaa ka dambeeyay ka dib markii madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, uu sheegay hadal guux badan ka kicyay gudaha waddanka Itoobiya. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo-xireenka wayn ee ay Itoobiya ka dhinac dhisayso Webiga Nile.
Dhanak kale ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, Hailemariam Dessalegn, ayaa si caro leh arrintaas uga falceliyay. Dessalegn ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in hadalka Trump uu u sheegay ra’iisul wasaaraha Suudaan uu yahay mid aan loo meel dayin.
Arrintaas ayaa waxaa sabab u ahaa tallaabada ay Itoobiya ku buuxinayso biyo-xireenkan wayn ka hor inta aanay wax heshiis ah la gaarin dalalka Masar iyo Suudaan. Dowladda Masar ayaa muddo dheer waxa ay ka soo horjeedday in webiga Nile laga dhinac dhiso waxkasta oo yarayn kara biyaha ay hesho.
Itoobiya ayaa iyana sheegaysa inay biyo-xireenkan u doonayso inay hesho koronto la isku halayn karo. Markii si buuxdo loo howlgaliyo biyo-xireenkaas, waxa uu noqon doonaa biyo-xireenka ugu wayn ee Afrika ee koronto lagu dhaliyo, iyadoo ay koronto heli doonaan 65 milyan oo qof oo Itoobiyaan ah.